Macnaha Ciidda iister-ka (Easter) iyo Jimcaha Wanaagsan (Good Friday)
​Qore: Abdi Duale
Waxaad is weydiin kartaa, maxay iister-ku muhiim u tahay? Waayo, haddii aan iister jirin Masiixiyadduna ma jirteen! Dhimashadii iyo sarakiciddii Ciise Masiix ayaa saldhig u ah wax kasta oo ay Masiixiyiintu rumaysan yihiin! Dhimashada Ciise ayaa inoo oggolaatay inaynu Ilaahay dib ula heshiino. Sarakiciddiisa ayaa ina siinaysa rajo ah inaynu mar kale noolaanayno, xataa dhimashada kaddib, “Oo haddii aan Masiixa la sara kicin, rumaysadkiinnu waa khasaare, oo weli dembiyadiinna ayaad ku jirtaan” (1 Korintos 15:17).
​​Maalinta Sarakiciddu (iister-ku) waa maalinta sannadka ugu quduusan ee Masiixiyiinta. Xataa waxay ka muhiimsan tahay Kirismas-ka. Waxay kaloo Kirismas-ka kaga duwan tahay in dhimashadii iyo sarakiciddii taariikhiyan la garanayo oo la qoray oo la hubo. Waxaynu ognahay inay ku salaysan tahay maalinta Kormaridda ee Yuhuuda oo kumanyaal sanno la xuso​​.
Sababta uu Islaamku uga Duwan Yahay Diimaha Kale oo Dhan
Qore: Rev. Bassam M. Madany
​​Dadka Maraykanka intooda badan iyo dadyowga kale ee reer Galbeedka ahiba, waxay u maleeyaan inuu Islaamku yahay sida diimaha waaweyn ee adduunka ka jira oo kale, sida Buudiisamka, Masiixiyadda, Hinduuga, Towreedda, iyo Shiintooga. Waxaa aad loogu hadaaqaa “Islaamku waa diin nabadeed,” oo xagjirnimo kasta oo Islaamka ka dhex jirta waxaa loo aaneeyaa oo keliya seef-laboodka. Markaa, xagjiriintan, ama Islaamiyiin ku-sheeggan ayaa diintii “nabadda” ahayd afduubay!